(Entsha)I-CUBIN-Container Cabin w/ Mountain View🌄😊🏞️
Antipolo, Calabarzon, i-Philippines
I-container yokuthumela ibungazwe ngu-Katrina
Yindlu encane yokuthutha imikhumbi entabeni!😁🏞️🌄🚃
I-CUBIN (kyoo-bin) iyiveni yesiqukathi esisetshenzisiwe esiphinde sazalwa njengaleli khaya elincane elihle, elihlanzekile, elinohlobo olulodwa elihlezi endaweni etshekile kakhulu (#TambayanCorner168).
Ngike ngasho ukuthi isentabeni? Yaaasss...futhi oh, inombono omangalisayo wezintaba zaseSierra Madre. 🌄🏞️🏡😁
Ngakho-ke woza uphile kuyo isikhashana futhi ukwenze kube okunye okukhumbuleka kakhulu nokuyingqayizivele kokuhlangenwe nakho kwakho!😁
Ufuna i-chillax futhi uthathe ikhefu kubuthi be-metro?
Kuzwele kuleli khaya elihle, elithokomele futhi eliyingqayizivele entabeni engekude kangako. Phefumula umoya wenkungu wasekuseni onempilo futhi ubuke ulwandle oluthile lwamafu ngaphakathi kwendawo ezungezile.
I-instagram iyakwazi ngempela! 😍🌄🏞️🏡
I-Cubin ihlezi entabeni futhi ngaphandle kokubuka, iza nomoya omuhle ophezulu womoya-mpilo ozungezwe izihlahla. Ukujikeleza kahle komoya omusha kulungele ikakhulukazi ngalesi sikhathi.
I-CUBIN itholakala phakathi kwedolobhana elinezintaba ngaphakathi kwedolobha.
Nakuba ukuthula okuphelele akusona isiqinisekiso njengoba kusemgwaqweni omkhulu, ukuba yingqayizivele kanye nokunethezeka kwendawo, kuhambisana nokubuka okuhle kwezintaba zaseSierra Madre, okungenzeka kuyayilungisa.
Ngaphakathi kohambo lwemizuzu eyi-10-15 kunezindawo zentengiso ezifana neRobinson's Place Antipolo, I-Mall, Victory Park & Shop, njll.
Ukulethwa kokudla kuyatholakala futhi sengathi useMetro Manila. Futhi eduze kunezitolo ezifana no-7-11, Alphamart, Mini-Stop, njll. Kukhona nezitolo zokudla zasemgwaqweni ezijwayelekile ezithengisa inkukhu ethosiwe kanye ne-Liempo, ama-pizza nama-burgers emigwaqweni emikhulu eya edolobhaneni. Futhi-ke imakethe yasemgwaqweni ehlala ithembekile endaweni eqhele ngamakhilomitha ambalwa, uma kwenzeka uzodinga izithako zokuthi uzopheka nini eCubin.
Nickname - K@ReN A former corporate executive who, one day, just snapped out of it, bravely packed her bags, left her hometown and decided to live a different kind of life -- one that truly matters. "She's the kind of high only a deep soul can get stoned to." (ctto)
Nickname - K@ReN A former corporate executive who, one day, just snapped out of it, bravely packed her bags, left her hometown and decided to live a different kind of life -- one t…
Ngizokwamukela mathupha wena nabangane bakho. Ekuseni ngovivi, ungase uhlanganyele nami emisebenzini yami yansuku zonke njengokuzindla, ukugibela intaba okufushane, ukulima ingadi, i-yoga nokunye ukuvivinya umzimba, kwengqondo nokomoya okuncamelayo. Ebusuku, uma nginesikhathi, ngingakujoyina isikhashana ukuze ngithole obhiya, uma ungathanda indlebe elalelayo. Kwesinye isikhathi abangani bami abahlekisa kakhulu beza bezozipholela nje nami futhi ukhululeke ukuhlangana nabo nihleke.😁😁😁
Ngizokwamukela mathupha wena nabangane bakho. Ekuseni ngovivi, ungase uhlanganyele nami emisebenzini yami yansuku zonke njengokuzindla, ukugibela intaba okufushane, ukulima ingadi,…
Hlola ezinye izinketho ezise- Antipolo namaphethelo